Wondershare dr.fone sokusekela
dr.fone yamathuluzi sokusekela
Kungakhathaliseki ukuthi izinkinga obhekana nazo uma usebenzisa dr.fone yamathuluzi, thina zihlale lapha ukukusiza ukusebenza wabakhipha.
Jikelele Imibuzo Evame Ukubuzwa
Imibuzo Evame Ukubuzwa Mkhiqizo
Buyisa Ikhodi yokubhalisa
Ukusisiza ukukusiza ngendlela esheshayo, sicela uphendule le mibuzo 2-3 ezilandelayo, futhi sizobe ukukuqondisa kusevisi ithimba kwesokudla. (Ukusekela Technical, Ukusekela Amakhasimende noma Sales)
Singabasiza kanjani kuwe?
Nginezinkumbulo imibuzo yobuchwepheshe mayelana nomkhiqizo ngathenga.
Nginombuzo mayelana ikhodi yokubhalisa, ukulanda, ukufaka noma isebenze umkhiqizo wami.
Ngifuna ukwazi yakho ilayisensi, ukuthuthukisa kanye imbuyiselo nezinqubomgomo.
Ngithathe nje zokuqalisa futhi Nginemibuzo ethile.
Nginemibuzo ethile mayelana nomkhiqizo imisebenzi kanye imikhawulo ngaphambi kokuthenga yami.
Sengivele ukuthenga , kodwa enginakho imibuzo mayelana ne-oda lami .
Enginakho iziphakamiso umphathi umkhiqizo.
Ngifuna ukwabelana izibuyekezo zami nabanye amakhasimende.
Sicela ukhethe isidingo sakho ethize kusukela ngezansi.
Umbuzo wami uwukuthi mayelana uyalulama amafayela kusuka ku-iPhone, i-iPad ne-iPod touch yami.
dr.fone yamathuluzi ye-iOS
Nginemibuzo ethile yezobuchwepheshe mayelana nomkhiqizo ngathenga.
Nginemibuzo ethile mayelana nemisebenzi umkhiqizo kanye imikhawulo ngaphambi kokuthenga yami.
Wondershare uDkt, Fone ye-iOS
Sim Isevisi ye-Vula
Umbuzo wami uwukuthi mayelana recoverying amafayela kusuka Android wami smartphone (Samsung, njll.)
Lutho kulokhu okungenhla, sicela ukhethe lolu hlelo unesithakazelo
Sicela uthumele imibuzo bese uthola izimpendulo kusuka ochwepheshe PDFelement zomphakathi.
Sicela ukhethe isigaba esisodwa esichaza kangcono inkinga yakho.
Ngifuna ukwazi ukuthi lolu hlelo lusebenza ukuze alulame idatha yami phambi engiwuthenga ke.
isofthiwe wethu uyakwazi ukulungisa iOS errros enjengaleyo echazwe. Lokhu kusho ukuthi uhlelo lokusebenza ukhandwa (isib washaya mode alulame noma Apple logo iluphu) futhi ulethe idivayisi abuyele esimweni yokusebenza ejwayelekile. Lokhu kungenziwa ngaphandle kokuphazamisa idatha yakho. Lesi isici ukuthi izosebenza kuphela kule nguqulo ikhokhwe software yethu, futhi asikho isiqinisekiso sokuthi uzosebenza.
Awesome, inkinga yaxazululeka! Ngidinga usizo ngqo. Qala phansi
Siyayazisa imicabango yabantu amakhasimende ethu, futhi siyakwamukela ukuthi usitshele ngomuzwa wakho Wondershare uMkhiqizo wakho. Sithumele yakho imibono, izicelo, noma ngisho imibono. Nakuba singeke sikwazi ngqo aphendule impendulo yakho, sizosebenzisa ukuthuthukisa imikhiqizo kanye namasevisi ethu. Uma unabo isimo lobuchwepheshe noma ukwesekwa, khona-ke ngomusa uxhumane nathi ngokusebenzisa Ukusekela sethu Sosizo, njengoba sizokwazi ukuphendula ngayo usizo
Iziphakamiso noma izimfuneko izici Uhlelo
A ukuncoma mayelana nomkhiqizo
Siyakwazisa ngempela imibono neziphakamiso zakho ukuze imikhiqizo yethu. Impendulo yakho izodluliselwa ukuthuthukiswa ithimba lethu ukuze ubuyekezwe futhi ukubona ukuthi ingabe kungaba ukungezwa okuzayo. Nakuba asikwazi ukuphendula emuva, siyazi ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukuze senze umkhiqizo best ukuthi singakwazi, futhi impendulo yakho kuyosisiza lukhulu.
Uma wenza kanjalo udinga usizo nomunye imikhiqizo yethu, xhumana nethimba lethu losekelo ku Ukusekela sethu Sosizo.
Siyabonga isikhathi sakho, futhi ukusekela!
(Isayizi ifayela yokulayisha 60 MB)
Khokha Indlela PayPal Ikhadi lesikweletu
Ukusebenza System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Lwe-Windows 7 (32bit) Lwe-Windows 7 (64bit) I-Windows Vista (32bit) I-Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Intaba Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (uCaptain) 10.12 (Sierra) Okunye
umkhiqizo Inguqulo Windows (7.0.2) Windows (7.1.0) Windows (7.2.0) Windows (7.3.0) Mac (6.1.0) Mac (6.9.0) Mac (7.0.0) Okunye
Ukusebenza System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Lwe-Windows 7 (32bit) Lwe-Windows 7 (64bit) I-Windows Vista (32bit) I-Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Intaba Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (uCaptain) 10.12 (Sierra) Okunye
Android Data Recovery Android SD Card Data Recovery Android Yehlulekile isikrini Data Recovery Android Lock Screen Ukususwa
Ngithumelele i-imeyili kule isixazululo
Nikeza ulwazi oluceliwe futhi sizobe sixhumane nawe omunye ukwesekwa kwethu ejenti.
egiOS 9.0, i-Android 5.1